"မတိုင်ပင်အပ်သူ ရှစ်ဦး၊တိုင်ပင်မှုတွင် မလုံခြုံ စိတ်မချရသူကိုးဦး"
၇။ မိမိတစ်ဦးတည်းသာ ကြံစည်တတ်သူ။
၈။ မိုက်မဲသောသူ ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ထိုရှစ်ဦးတို့ကို တိုင်ပင်မိခြင်းဖြင့် အကျိုးပျက်တတ်ခြင်းကား ဤသို့ဖြစ်၏။
လက္ခဏာရေး သုံးပါးစလုံးကို ရှု ပြီး မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ၆၂ ပါးလုံးကို လိုက်သတ်ရမည်လား...?
ဒကာ။ ။ သာသနာတော်မှာ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ လက္ခဏာရေး သုံးပါးပိုင်းခြားရှုမှတ် ပွားများနိုင်ဖို့ဟာ အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ပဲဟု ဟောကြားကြပါတယ်၊ သုံးပါးစလုံးကိုပဲ လိုက် မှတ်ပွားများနေရမှာလား၊ တစ်ပါးတည်းကိုပဲ မိအောင်မြင်အောင် ရှုမှတ်နေရမှာလား၊ ကျမ်းစာ ကဘယ်လို မှာဆိုပါသလဲ ဆရာတော်။
ဆရာ။ ။ အင်း… အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ဆိုတဲ့ မှတ်ပွားစရာ တရား သုံးပါးကိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ပြောဆိုနေကြတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် တကယ်ဉာဏ်မြင် ဒိဋ္ဌိစင်အောင်တော့ လုပ်တဲ့သူက နည်းလှပါတယ်၊
ဒကာ။ ။ မြတ်စွာဘုရားကရော၊ ဆရာတော်တို့ကပါ အတ္တဒိဋ္ဌိမရှိရ မစွဲရ ငါစွဲဖြုတ်ပါ “သဗ္ဗေ ဓမ္မာ အနတ္တာ” ငါမရှိ ငါ့ဥစ္စာမရှိ အားလုံးရှိသမျှ အနတ္တချည်းသာလို့ ဟောပြောဆုံးမနေကြပေမင့် ဗုဒ္ဓဘုရားကတော့….
(၁) ဘိက္ခဝေ၊ ငါ၏ချစ်သား ရဟန်းများတို့။
(၂) ဧ၀- မဟံ ၀ဒါမိ၊ ငါဘုရား ဤသို့ ဟော၏။
(၃) သုဏာထ မမ ၀စနံ၊ ငါ့စကားကို နားထောင်ကြ…..
စသည်ဖြင့် စာပေကျမ်းဂန်တွေထဲမှာ ငါဘုရား၊ ဘုရားငါတွေ များစွာဖတ်ရလို့ ဘုရားသခင်မှာ ငါစွဲ အတ္တဒိဋ္ဌိ ရှိသေးတယ်နော် ဆရာတော်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:44 AM 1 comment:
န္နော ဟမ သ္မိ အ၀ိနိပါတ ဓမ္မော နိယတော သမ္ဗောဓိပရာယဏောတိ။
ပုံထဲမှာ ပြထားပုံကတော့ သေးသေးလေးပါပဲ။ မြင်းမိုရ်တောင် အောက်နားလေးမှာ အနောတတ်အိုင် ဆိုပြီးတော့လည်း ပြထားပါသေးတယ်။
တစ်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်း ---
ကိုရင် ကျောင်းသားတွေ ၂-နာရီ စာအံနားတော့--
-ဆော့ကစားတဲ့ ဆူဆူညံညံ အသံတွေနဲ့ ---
ဆရာတော်ကြီးက မန္တလေးက ပြန်အကြွနဲ့ ဆုံတော့---
“ကိုရင်တို့- ဒီအနား မဆော့ကြနဲ့။
တပည့်တော်ကျောင်းနားက ပိုပြီးတော့ ကျယ်တယ်။
လက္ခဏာပညာကို အလွန့်အလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်သွားတော့ လမ်းမှာ ခြေရာတစ်ခုကို တွေ့ရတယ်။ ခြေရာက်ို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ခြေထောက်ရဲ့ လက္ခဏာဟာ မြေမှာထင်တော့ အဲဒီ လက္ခဏာဆရာက အကဲခတ်တယ်။
``ဟော.... ဒီခြေထောက် လက္ခဏာ ပိုင်ရှင်ဟာ ရှင်ဘုရင် ဖြစ်ရမယ်။ ရှင်ဘုရင် လက္ခဏာကို ဟောဒီခြေရာမှာ လာတွေ့တယ်။ မင်း ဖြစ်မယ်´´
“ခန္တီ ပရမံ တပေါ တိတိက္ခာ”
●ခန္တီ- သည်းခံခြင်း ခန္တီတရားသည်
ခန္တီ - သည်းခံခြင်းကို ဘာဖြစ်လို့အမြတ်တရားလို့ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောတာပါလဲ။
တက္ကသိုလ် ဆရာတစ်ယောက်က အသက်နှစ်ဆယ် ဝန်းကျင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်ကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အောက်ပါသမိုင်းရာဇဝင်လေးတစ်ခုကို ပြောပြပါတယ်။
"မင်းတုန်းမင်းကြီးလက်ထက်က ပညာရှိအမတ်ကြီး ဦးချိမ့်ဆိုတာ ရှိတယ်။ ဦးချိမ့်ဟာ သူ့အမေရဲ့  ထဘီကို ကိုယ်တိုင်လျှော်ပေးတယ်။ အိမ်ဖော်လို့ခေါ်တဲ့ အခိုင်းအစေတွေရှိပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မလျှော်ခိုင်းဘူးတဲ့။
သာဓုခေါ်တယ်ဆိုတာ အမျိုးအစားအားဖြင့် သုံးမျိုးရှိတယ်။အဲဒါတွေကတော့-
၁။ သာဓု နောက်လိုက်
၂။ သာဓု ဘိန်းစား
၃။ သာဓု အ၀စား-တို့ပဲ ဖြစ်တယ်-ဟု မိန့်တော်မူကာ
သာဓု သုံးမျိုးကို ဆက်လက် ရှင်းပြတော်မူသည်။
“ကံ” ဆိုတာကတော့ အားလုံးသိနေကြတဲ့အတိုင်း မိမိရဲ့သန္တာန်မှာ ဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ လှုံဆော်မှု မနောကံ၊ နှုတ်ကထုတ်ပြောမှု ၀စီကံ၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုလုပ်မှု ကာယကံလို့
* “ ဒုက္ခံ ဒုက္ခသမုပ္ပါဒံ၊ ဒုက္ခဿ စ အတိက္ကမံ၊
အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ အဋ္ဌကနိပါတ်၊ ဒါနဝဂ်၊ ပထမသုတ်၌ လာဒါန (၈)မျိုး